China Gallic Acid （Pharmaceutical Giredhi r Mugadziri uye Mutengesi | Sanjiang
Chigadzirwa zita: Gallic asidhi, Pharmaceutical giredhi）
Chemical zita: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Structural fomula: C7H8O6 / 170.12 g / mol
Zvivakwa: Ichi chigadzirwa chena kana chena crystalline poda, yakanyungudika mumativi makumi maviri neshanu emvura, zvikamu zvitanhatu zve ethanol, zvikamu zviviri zvemvura inodzika, uye yakanyungudika zvishoma mu ether.
Hunhu index: Chigadzirwa chinoenderana neEuropean zviyero (chikamu chekutanga), chiJapan nyika yenyika JIS zviyero (chikamu chekutanga), US Pharmacopoeia 27th edition, uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Zvishandiso/nzira dzekushandisa: Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya mumishonga, dhayi, kemikari uye organic synthesis maindasitiri, uyezve nekuongororwa kwesimbi isingawanzo.
Kuchengetedza: hunyoro-chiratidzo, yakajeka-chiratidzo, chisimbiso chengetedzo
Kurongedza: yemukati epurasitiki yekunze rakarukwa bhegi, mambure uremu 25 kg
Mune hutano uye indasitiri yezvokurapa, Gallic acid inoshandiswa pakurapa gomarara, seanorwisa-kuzvimba, inopa antioxidant zvivakwa, zvinobatsira kune varwere cheshuga uye vanoshanda seanorwisa fungal chiitiko. Kuwedzera kudiwa kweGallic Acid muKudya & Beverage Indasitiri uye Chemishonga Maindasitiri zvinhu zvakakosha zvinotarisirwa kukurudzira kukura kwepasi rose Gallic Acid Market munguva iri kuuya. Uye zvakare, kunyorera kweGallic Acid mune zvekuzora uye fashoni, kunyanya kugadzira dhayi reganda uye zvigadzirwa zvebvudzi, iri nani mukana kune vhudzi fashoni Indasitiri, inofungidzirwa kupisa iyo yeGallic Acid yepasi rose. se antioxidant, Gallic acid inokwanisa kudzivirira muviri kurusununguko rwemahara uye kukuvara kweiyo oxidative uye iyo inorwisa-kuzvimba zvinhu zveGallic acid inoita kuti inyanye kubatsira sezvo hosha dzehutano dzakawanda dzichibva mukuzvimba Izvi zviito zvekurwisa kuzvimba zvakawanikwa zvichibatsira kurwisa allergies. Zvekushandisa zvekurapa zvichave zvichikurumidza kukura musika nekuda kweiyo pfuma yeGallic acid sevanyengeri vanokanganisa vane mikana yekudzivirira uye yekurapa mhedzisiro muzvirwere zvakawanda, uko kushushikana kweiyo oxidative kwakabatanidzwa, kusanganisira chirwere chemoyo, gomarara, kusagadzikana kweiyo neurodegenerative uye mukukwegura. Biological zviitiko musika ichakura nekushandiswa kweGallic Acid sekukonzera zviitiko zvakasiyana zvehupenyu senge antibacterial, anti-fungal, antiviral, anti-kupisa, antioxidant, anticancer, anti-chirwere cheshuga.
200 T / Y
Pashure: Methyl Gallate
Zvadaro: Yakachena kuchena Gallic acid
Tenga Gallic Acid
Gallic Acid Inowedzera
Chemishonga Giredhi Gallic Acid
Zvishandiso zveGallic Acid